Fabio Capello Muxuu Ka Yidhi Sheekada Ah Sidii Looga Badin Lahaa Cristiano Ronaldo Iyo Lionel Messi Ama Kooxaha Ay U Ciyaaraan? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Tababare Hore Fabio Capello ayaa ka hadlay awoodda ay yeelanayaan labada kooxood ee ay hadba ku ciyaarayaan Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo, iyo waliba qaabka ay naadiyada kale uga guuleysan karayaan.
Tababaraha hore ee kooxaha Real Madrid, AC Milan iyo Juventus, waxa uu kale oo uu soo qaaday isbeddelka ku dhacay Real Madrid markii uu ka tegay Cristiano Ronaldo, waxaanu naadiyada kale ee dunida u tilmaamay hal arrin kaliya oo ay samayn karayaan marka ay doonayaan inay libin ka helaan kooxaha ay ku jiraan Messi iyo Ronaldo.
Capello oo waraysi siiyey wargeyska AS, waxa uu yidhi: “Marka aan telefishanka ka falanqaynayo, waxa aan mar walba idhaahdaa, haddii aad doonayso inaad garaaco Madrid (oo uu Cristiano Ronaldo ku jiro), waxaad u baahan tahay in ugu yaraan aad laba gool ka dhaliso, sababtoo ah, wxaxaad ogtahay in Cristiano uu hubaashii hal gool keeni doono. Sidaas oo kalena waxa ah Barca oo haysata Messi.”
Capello waxa uu soo bandhigay tayada looga baahan yahay ciyaartoyda ay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona soo iibsanayaan iyo astaamaha gaarka ah ee laga rabo, waxaanu yidhi: “Waxa lama huraan ahinaad isbeddel samayso, adigoo taxaddaraya. Waa inaad ciyaartooyo isbeddel samayn karaya lasoo saxeexato, sababtoo ah marka aad xidhato funaanadda Real Madrid ama Barca, waxa garbahaaga fuulaya culays weyn. Haddii aanad tayo badan lahayn, waad fashilmaysaa.”
“Sidan oo kale waxay dhacday waqtigaygii Milan, markii ay ahayd inaan ka ciyaaro San Siro. Waxa joogay ciyaartoy badan oo u malaynayay inay wanaagsan yihiin, markii dambena fashilmay.” Ayuu raaciyey.
Fabio Capello waxa uu ahaa tababarihii Real Madrid keenay Marcelo, Gago iyo Higuan, waxaanu sharraxyaaa sababta ay ciyaartoyda da’da yar leh ugu adag tahay inay saldhigaan Santiago Bernabeu, waxaanu gorfeeyey sida Rodrygo, Brahim, Vinicius iyo Odegaard ay ugu adkaanayso inay boos joogto ah helaan, waxaanu yidhi: “Bishii December, madaxweynaha ayaa i weydiiyey, maxaad Fabio u soo gelin weyday (ciyaartoydan)? Waxaan ugu jawaabay ‘Sababtoo ah waa carruur, waana in waqti la sugo.’ Waa ciyaartoyda mustaqbalka, waxay samayn karaan taariikh. Midkooda kaliya ee waxyar uun sameeyey waa Gago, halka ay labada kale laacibiin waaweyn noqdeen. Waxay u baahan yihiin khibrad iyo dhaqan. Sababtoo, inta aad da’yar lasoo saxeexato ma isticmaali kartid, laakiin inyary yar, adiga oo taxaddaraya. Masuuliyad culus ma saari kartid.”
Kulanka Real Madrid iyo Manchester City ee lugta labaad ee wareegga 16-ka Champions League ayaa uu isagana ka hadlay, waxaanu yidhi: “Aniga ahaan, wax walba way isbeddeleen, fasaxan (Coronavirus) waxa uu meesha ka saaray in kooxi mudnaanta yeelato. Ma garan karno haddii la ciyaari doono, sida kooxuhu ahaanayaan waqtigaas, mana jirto cid garan karan karaysa kooxda gacan sarraynaysa.”